12 Atirisho Ugu Cabsida Badan Bollywoodka Iyo Waxyaabaha Ay Ka Baqaan Sida Xasharaadka (+Sawiro) – Filimside.net
12 Atirisho Ugu Cabsida Badan Bollywoodka Iyo Waxyaabaha Ay Ka Baqaan Sida Xasharaadka (+Sawiro)
March 18, 2019 Ali Aadan
Sida guur Ragg iyo Dumar waxaa in badan geesisan Ragga oo dumarka qalbigooda waa jilcanyahay waxyaabo yar yar ayee si fudud oga baqaan ama oga cabsadaan midaasna waa abuuris Alle SWT.
Hadii aad aragto Dumar cayayaan ama xashaarad ama waxyaabo iska yar ka baqayaan ha moodine inee kas iyo kutalo gal ka tahay ee waa xaqiiq jirto oo sida ayaaba lagu abuuray waana wax xag Alle ah.
Waxaan idiin heynaa 12-ka atirisho Bollywoodka ugu cabsida badan ileen dadka isku mid ma ahan dumarkana isku mid ma ahan oo wey kala cabsi ama baqdin badan yihiin mid walbana wax gooni ah ayee ka cabsataa.
Halkaan hoose kaga bogo 12 atirisho iyo waxyaabaha ay ka cabsadaan:
Atirishadan geesinimo shaashada waad ugu aragtay balse nolosha dhabta ah waxay aad oga baqdaa mugdiga qolkeeda habeen iyo maalin waxaa u furan daaqada ama dariishada si ay iftiin oga hesho hadi xitaa nalka dansanyahay sababto ah mugdi maba dhex seexan karto atirishadan si dabiici ah ayee oga baqdaa.
Atirishadan dunida waxay ugu necebtahay maska maba la tuso oo cabsi gooni ah ayee ka qabtaa waana mid kamid ah atirishooyinka nolosha dhabta ah ugu cabsida badan ayadoo maska ka cabsata si weyn..
Katrina cabsideda ugu weyn waxay kusoo koobtay yaanyada miraha leh (Tomatoes) aad ayee u neceb tahay mana laga yaabo Katrina cunno yaanyadaas lagu kariyay ama kujirta inee cunto gaajo walbo oo heysa.
Atirishada Vidya Balan waxay si weyn oga baqdaa bisada (Cat) hadiiba nolosheeda aysan fadhin Karin indhahana taageyso misane ay qeylineyso markaas waxaa hor joogto bisad nooca waa weyn waayo aad ayee xidigtaan oga baqdaa bisadaha.
Xidigtaan wax noole ah kama baqdo waa atirisho waxyaabahas aan lagu cabsiin Karin balse aduunka waxay ugu necebtahay wadista mootada iyo inee wado waayo waxay ka baqee inee ka dhacdo oo ay jabto filmkii Rabne Bana Di Jodi mar ay mootada wadeyso SRK-na gadaal saaranyahay dhibka laga maray muuqaalkas kooxda filmka dhowr jeer ayee ka sheekeyeen.
SRK ayaa in badan ku caawiyay wadista muuqaalkaas ay mootada Anushka wadeeso balse kaligeed ma wadi karto wey ka cabsataa maadama ay aaminsantahay inee ka dhaceyso..
Lasoco qeybta dambe maqaalka xiisaha leh..
Waxaa Aqrisay 636